Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, Mashiinka Mashiinka CNC
Mashiinka Lathe-ka ee looxa CNC Wood
Mashiinka Calaamadaha Laser
Mashiinka Mashiinka Birta
Mashiinka Jarida Birta / Flasma
Mashiinka Mashiinka / Mashiinka Goynta maqaarka
Mashiinka Xardho Laser
Qaybaha dayactirka, Qalabka & Qalabka
Taageero iyo Adeeg
Sale Factory alwaaxa Cu ...
Sale Hot Door Alwaax Samaynta M ...
1390 CO2 Laser xardha ...
APEX 1516 Hal dhidibka CNC Wood ...
Warshad Jinan Hot Sale Auto ...
Jinan Single dhidibka CNC Wood ...
Qoryaha Jeedinta Hal Dabaq ...
Panel maamusha Single Axi ...
Wood CNC router la Disc A ...
Xayeysiinta Xaqiijinta Sare ...
Iron Steel Copper Birta Mou ...
120watt CO2 Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser Tamarta Tamarta Laser Es100
1. Es100 Laser Power Supply Waxyaabaha ugu Muhiimsan: Waxqabadka PFC ee bilowga ah, AC90-250V baaxad danab ballaadhan oo ballaadhan, guud ahaan dhammaan waddamada danab. Naqshad gaar ah oo loogu talagalay qolofka banaanka, muuqaal qurux badan, kuleyl wanaagsan. 3.Waxaa la ansixiyay habka xakamaynta hadda, leyser xasilloon, iswaafajin fiican, la qabsi badan noocyada kala duwan ee tubooyinka laser. Xakamaynta awoodda 4.Simple, isticmaaluhu wuxuu xakameyn karaa leysarka oo leh heer sare ama heer hoose ah. 5.With badhanka tijaabada, fududahay in la tijaabiyo tuubada leysarka iyo korantada Es100 ...
HY-W150 150W laser co2 isha laga helo 150 180w noocyada kala duwan ee tuubbada
Muuqaalka ugu muhiimsan ee W150 CO2 korantada korantada 150w co2 laser laydhka korantada Astaamaha Muhiimka ah Cayaarta 1650mm 1850mm 2050mm 130w 150w 180w co2 laser tube 1. Iswaafaqsanaan wanaagsan: Waxaa lagu dabaqi karaa tuubooyinka laysarka 130w 150w 180w oo ay soosaaraan warshado kaladuwan. Waxay leedahay xasillooni awood wanaagsan iyo la qabsi xoog leh, Waxay sii dheereyn kartaa nolosha adeegga tuubbada laser-ka. 3, Xakamaynta fudud: bilowga iyo joojinta leysarka waxay noqon kartaa ea ...
100W Laser Power Supply oo loogu talagalay Laydhka Laser 100w
Muuqaalka Guud ee 100w 120w xalka korantada xasilloonida xasilloonida 1. Baaxad aad u ballaaran oo Awoodda Wax-galinta: AC110-AC260V 2. Waxqabadka xasiliyaha danab: marka korantada la gelinayo ay tahay mid aan xasilloonayn, heerka isbeddel ee hadda ka yar 1%. Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay talooyinka AC dalal aan xasilloonayn. 3. Iswaafajin wanaagsan: Waxaa lagu dabakhi karaa tuubooyinka laysarka ee 80W, 100W, 120W oo ay soosaaraan warshado kala duwan. 4. Awooddan koronto waxay leedahay “TEST” badhanka kaas oo gacanta ku tijaabin kara leysarka soosaarka. 5. Ku ...
180-200w Laser Tube Power Source W200
Moodal: HY-W200 koronto siinta oo loogu talagalay 180w-200w tubooyinka laser-ka ee mashiinka goynta laser-ka. Liiska Xirmada: <1> HY-W200 koronto bixin * 1pc; 200w co2 korontada HY-W200 Feature Main 1. Kala duwanaansho aad u balaaran oo danab galineed: AC110-AC220V 2. Xilligan xaadirka ah wuxuu leeyahay xasilooni sare: marka danab gelinta aysan xasilooneyn, heerka isbedelka hada uu kayaryahay 1%. 3. Iswaafajin wanaagsan: Waxaa lagu dabakhi karaa 180w-200w EFR / RECI / YONGLI, WEEGAINT / SP ect brand co2 laser tube tuubo ay soo saartay di ...
Isha laser-ka HY-W200 ee 180 / 200w laser co2 tube
200w co2 korontada HY-W200 Feature Main 1. Kala duwanaansho aad u balaaran oo danab galineed: AC110-AC220V 2. Xilligan xaadirka ah wuxuu leeyahay xasilooni sare: marka danab gelinta aysan xasilooneyn, heerka isbedelka hada uu kayaryahay 1%. 3. Iswaafajin wanaagsan: Waxaa lagu dabakhi karaa 180w-200w EFR / RECI / YONGLI, WEEGAINT / SP ect brand co2 laser tuubooyinka ay soo saaraan warshado kala duwan. 4. Awooddan koronto waxay leedahay “TEST” badhanka kaas oo gacanta ku tijaabin kara leysarka soosaarka. 5. Laydhka Tamarta Laserku wuxuu leeyahay Biyo Baxsan ...
Iibinta Jarida Warshadaynta Goynta Xardho 1325 Wood CNC Router Atc CNC Mashiinka
ATC cnc router oo leh qalab toos ah oo wax lagu beddelo qalabka 12, wuxuu dooran karaa 10 qalab, 8 qalab, 6 qalab iwm.
Si fiican loo yaqaan 9.0KW HSD ATC dunmiiqa, awood jarista xoog leh, buuq hooseeya, waqti shaqo oo dheer. Qaabeynta kale oo ay kujiraan nidaamka xakamaynta Taiwan LNC, Japan yaskawa servo motor, Taiwan Detal inverter, HIWIN hage tareen, Helical rack iwm.
Ku habboon alaabada guriga, alaabta adag ee alwaaxa, alaabta xafiiska, soosaarida albaabka alwaax, iyo sidoo kale codsiyada kale ee biraha iyo biraha jilicsan.
Ballaaran Loo Isticmaalo Qalabka Beddelka Qalabka Beddelka Qoryaha Nadiifinta Mashiinka CNC Mashiinka Qalabka Qalabka
ATC cnc router oo leh qalab wax lagu beddelo qalab wareeg ah 12 qalab, wuxuu dooran karaa 10 qalab, 8 qalab, 6 qalab iwm.
3 Mashiinka Mashiinka Xardho CNC dhidibka CNC Mashiinka Jikada Golaha MDF
Kani waa nooca dhiirrigelinta APEX1325 cnc router ee loogu talagalay macaamiisha wakiilka, miiska T-slot, nidaamka xakamaynta NCstudio, mootada talaabada iyo darawalada, 3.0kw dunmiiqa biyaha qabow iwm Sidoo kale waxay leeyihiin APEX1530, APEX2030, APEX2040 IWM. Qaabka mashiinka ayaa loo habeyn karaa. 2 Sano ayaa damaanad qaadaya nolosha oo dhan taakuleyn xagga farsamada ah, tababarka khadka tooska ah sidoo kale wuxuu u soo diri karaa injineer tababar ku sameeya warshad shisheeye. Halbeegyada Farsamada: Faahfaahin Halbeegga 1 X, Y, Z Aagga Shaqada 1300mmx2500mmx200mm 2 Xajmiga Miiska 1450mm × 2940 ...
Xarunta Mashiinka CNC ee Goynta Dhagaxa iyo Nadiifinta iibka kulul 2021
Mashiinka noocan ahi waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee Jinan APEX CNC Qalabka co,. Ltd oo ku takhasusay soo saarista mishiinka. Qalabka ay mashiinku ka baaraandegi karaan oo ay ku jiraan dhoobada, marmarka, granite, marmar cad, dhagaxa ciida, muraayadda, biraha, 3D marmar dabiici ah, dhagax macmal ah, qabri dhagax, taariikhi,
Albaabka Alwaaxa Sameynta Mashiinka Mashiinka CNC oo leh Miis Dual ah
* Afaraad dunmiiqa qaboojiyaha (HQD ama Talyaaniga HSD dunmiiqa ikhtiyaar), tayo sare leh iyo 24h si joogto ah u shaqeeyaan.
* Tareenka laba jibbaaran ee HIWIN, isku xirnaan wanaagsan iyo qallafsanaan, oo aan dhalanrog lahayn isticmaalka waqtiga dheer.
* Gudbinta hayayaashii xawaaraha sare ee xarigga XY, iyo gudbinta kubbadda saxda ah ee saxda ah ee dhidibka Z,
hubinta xawaare sare iyo saxnaan sare isla waqtigaas.
* Pneumatic ATC oo loogu talagalay 3 dunmiiqayaal leh qalab kala duwan Qalabka aaladda otomaatigga ah ee beddelashada wuxuu keydiyaa waqti si gacanta loogu beddelo qalabka.
* Miiska faakiyuumka oo wata bamka faakiyuumka, si dhakhso leh oo xasiloon ayuu u hagaajin karaa agabyada miiska si ay u xardhaan, u badbaadiyaan waqti iyo nolol dheer.
* Nidaamka xakamaynta: Waxaan u adeegsanaa nidaamka xakamaynta Dsp, Nc-studio nidaamka xakamaynta, Syntec oo ka socda Taiwan ama OSAI oo ka socda Europ.
Qoryaha loo yaqaan 'CNC CNC Router' oo leh 4th Rotary dhidibka Qaab cusub oo jidhkiisu culus yahay Birta
Sp dunmiiqa wareejin karo 180 digrii, oo si gaar ah loogu talagalay kabadhka dusha sare ee qalooca, albaabada iyo qurxinta gudaha. iyo sidoo kale qaar ka mid ah caaryada prcessing.
Waxaa loo isticmaali karaa in si ballaaran loogu farsameeyo habka haynta Vacuum iyo kuwa ururiya boodhka.
I Ku qalabaysan waxyaabo tayo sare leh oo loogu talagalay mashiinka, sida HDS ATC spindle, iyo dunmiiqa Yaskawa servo motor & Taiwan Delta Inverter, Becker Vacuum pump,
Hiwin biraha hagayaasha toosan ee laba geesoodka ah, nidaamka xakamaynta SYNTEC iyo wixii la mid ah, si mashiinka loogu hayo xaaladdiisa ugu fiican xitaa ka dib shaqaynta sannado badan.
Ku qalabaysan dhidibka wareega ee 400mm
1. Waxaan isticmaalnaa 5. 5kw qashin aruuriyaha leh silsilad laba jibbaaran Badanaa 3. 0kw okay, 5. 5kw gebi ahaanba waa ku filan, Ma wanaagsana in la isticmaalo kan ka weyn
2. Waxay nuugi kartaa boodhka iyo guntimaha, nadiifin kara jawiga shaqada waxayna ilaalin kartaa caafimaadka aadanaha)
123456 Xiga> >> Bogga 1/16
Wadada Jingliu, Degmada Huaiyin, Jinan City, Shandong Provice, Shiinaha.